पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, 'लोकतन्त्र र संविधान रक्षा गर्ने अदालतलाई नमन छ'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन १३, २०७७ सन्तोष सिंह
धनुषा — पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिभित्र चिरा परेको लोकतन्त्र बलियो नभएसम्म मुलुकमा लोकतन्त्र कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् ।
कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति धनुषाले जनकपुरमा बिहीबार आयोजना गरेको महेन्द्रनारायण निधिको ९९ औं जन्मजयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले राजनीति दल विधि र प्रक्रियाअनुसार नचलेर चिरा परेकोले मुलुकमा समस्या आएको बताए । 'लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशीमा विश्वास गर्नेको जित भएको छ', डा.यादवले भने, ‘अदालतले लोकतान्त्रिक संविधानलाई बचाएको छ । मुलुकमा लागेको ग्रहणलाई अदालतले संविधानअनुसार हटाएको छ । संविधानलाई बचाउने अदालतलाई नमन गरी समन गर्न चाहन्छु ।’ उनले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि अदालतले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको उल्लेख गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदरपछि ४/५ चरणमा सरकार गठन प्रयासपछि मात्र मुलुकमा निर्वाचन हुने बताउँदै डा. यादवले लोकतन्त्र रक्षा गरी संविधान कार्यान्वयनका लागि अदालत र निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हुनु पर्ने बताए । संवैधानिक निकायमा राजनीतिक बाँडफाँड बन्द गरी नियुक्तिमा विज्ञलाई प्राथमिकतामा राखेपछि मात्र संवैधानिक निकाय निष्पक्ष हुने उनले बताए ।
डा. यादवले नेपालको राजनीति दलमा आर्थिक अनुशासन नभएको टिप्पणी गरे । कांग्रेस, नेकपा र मधेसवादी दलसहित कुनै पनि दलमा आर्थिक अनुशासन नभएको उनले आरोप लगाए ।
पछिल्लो सय वर्षयता सैनिक सासन, साम्यवाद, लोकतन्त्रको क्रममा हुकुमी शासनमा जेल परे पनि एउटै विचारको राजनीति गर्ने गान्धीवादी नेता महेन्द्रनारायण निधिको कार्यकर्ता र डाक्टर भएर काम गर्ने सम्झान सुनाउँदै राजनीतिका नयाँ पुस्ताले निधिको जिवनी अवलम्बन गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, प्रदेश २ को प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतो, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलगायतले महेन्द्रनरायण निधिको स्वभाव र विचारबारे चर्चा गरेका थिए ।
प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ १७:४३
फाल्गुन १३, २०७७ सन्जु पौडेल
तिलोत्तमा — रुपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहीबार भएको डिभिजन ‘ए’को खेलमा लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लबले एमसीसी क्लबलाई २ विकेटले पराजित गरेको छ ।
टस जितेर ब्याटिङमा आएको एमसीसीले निर्धारित ३९ ओभरको खेलमा ३८.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाई १३५ रन बनायो । उसका लागि मोहिन खानले नटआउट ३०, विजय प्रजापतीले २२, मोहम्मद हुसेनले १४ र सुशान्त थापाले १२ रन बनाए । बलिङमा लुम्बिनीका अजय लोनियाले ३, लालबहादुर थापा र शंकर रानाले २/२ तथा दुर्गेश गुप्ता र साहब आलमले समान १/१ विकेट लिए ।
जवाफी ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले ३७ ओभरमा ८ विकेट गुमाई १३८ रन बनाउँदै जित निकाल्यो । उसका लागि सन्दीप रजालीले ४०, अन्तिम थापाले नटआउट ३३ तथा सेजाद आलम र शंकर रानाले १०/१० रन बनाए । बलिङमा एमसीसीका सन्तोष रानाले ३, रोशनलाल गुप्ताले २, मोहम्मद हुसेन, शिवकुमार मौर्य र रमेश कुर्मीले समान १/१ विकेट लिए । खेलमा अन्तिम थापा म्यान अफ द म्याच भए ।
शुक्रबार डिभिजन ‘ए’ का बुटवल राइनोज र बुटवल–११ बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक संस्था रुपन्देही क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रशान्त विक्रम मल्लले जनाए ।
प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ १७:३५